Akụkọ - Ụdị igwe eji arụ ọrụ
A ga -enwerịrị ihe ọmụma igwe ị na -amachaghị banyere igwe. Igwe eji arụ ọrụ na -ezo aka na usoro iji gbanwee akụrụngwa ma ọ bụ arụmọrụ nke ihe eji arụ ọrụ. E nwere ọtụtụ ụdị nke machining. Ka anyị leba anya n'ụdị igwe eji eme ihe
Na -atụgharị (lathe kwụ ọtọ, onye na -ehi ụra): ntụgharị bụ nhazi nke ịkpụcha ọla site na arụ ọrụ. Mgbe ebe a na -arụ ọrụ na -agbagharị, ngwa ahụ na -ebipụ na workpiece ma ọ bụ na -atụgharị n'akụkụ ọrụ ahụ;
-Egwe ihe (vetikal -egwe ọka na kwụ -egwe ọka): egwe ọka bụ nhazi nke ịcha metal na n'usoro ngwaọrụ. A na -ejikarị ya iji hazie oghere na ahịrị nke ahịrị, yana ọ nwekwara ike iji anyụike abụọ ma ọ bụ atọ hazie ebe arc;
Na -agwụ ike: na -agwụ ike bụ usoro nhazi iji gbasaa ma ọ bụ mezie oghere ndị a gbapuru ma ọ bụ tinye na oghere ọrụ. A na -ejikarị ya eme ihe maka oghere nwere nnukwu ụdị ọrụ, nnukwu dayameta na nkenke dị elu.
Atụmatụ: njirimara bụ isi nke planing bụ ịhazi elu ahịrị nke ọdịdị ahụ. N'ozuzu, ịdị elu ya adịghị ka nke igwe igwe;
Slotting: slotting bụ n'ezie onye kwụ ọtọ. Ngwá ọrụ ya ndị e ji egbutu ya na -agbago na ala. Ọ dabara nke ọma maka igwe anaghị arụ ọrụ arc. A na -ejikarị ya ebipụ ụfọdụ ụdị gia;
Na -egwe nri (igwe nri n'elu, mgbagharị cylindrical, egweri oghere n'ime, igwe na -egweri ihe, wdg): igwe nri bụ usoro nhazi igwe na -eji igwe igwe na -egwe ihe. The workpiece esichara nwere ezi size na -eji ire ụtọ elu. A na-ejikarị ya emecha ngwụcha nke ihe eji arụ ọrụ na-ekpo ọkụ iji nweta nha ziri ezi.
Mkpọpu ala: mkpọpu ala na -egwu ala na arụ ọrụ igwe siri ike yana bitar drill; Mgbe a na -egwu ala, a na -edobe workpiece ahụ, na -ejikọ ya na idozi ya; Na mgbakwunye na ntụgharị, ihe egwu egwu na -emekwa mmegharị nri n'akụkụ aka ya.
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Aluminum CNC Machined Parts, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ihe nkedo, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile